१ः१.६० अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्दै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, हेर्नुहोस आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १ः१.६० अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्दै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, हेर्नुहोस आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 219 views
१ः१.६० अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्दै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, हेर्नुहोस आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ११ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा २ सय १८ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी ७६ प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढेको देखिन्छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू.९३ करोड ४१ लाख छुट्याएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू.६१ करोड २ लाख रहेको छ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको छ । सेबोनबाट माघ २८ गते स्वीकृति पाएको हो । स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले १ बराबर १ दशमलव ६० अनुपातमा ९७ लाख ६३ हजार २ सय कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । आगामी फागुन १६ गतेसम्म शेयर किन्ने शेयरधनीले सो हकप्रद शेयर भर्न पाउनेछन् । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँट पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू.१ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख २० हजार पुग्नेछ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १६९०
१८० दिनको भारित औसत मूल्य :रू. १९६५.३८
अध्यक्ष : पियूसराज अर्याल
िप्रमुख कार्यकारी अधिकृत : मनोज कुमार भट्टराई
वेबसाइट : primelifenepal.com
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ७ दशमलव ४० प्रतिशतबाट बढेर १८ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । हाल कम्पनीले बीमा कोषमा रू.५ अर्ब ५७ करोड र महा विपत्ती कोषमा रू.८ करोड २२ लाख छुट्याएको छ ।
कम्पनीले पुस मसान्त सम्ममा रू.१५ करोड ४८ लाख आम्दानी गर्दा रू.३ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ ।
कम्पनीको दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जा यो त्रैमासमा २ सय ३३ प्रतिशतले बढेर रू.४ अर्ब ८ करोड ५४ लाख पुगेको छ । कम्पनीको आय रू.१ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख र व्यय रू.८३ करोड ८५ लाख छ ।
यो त्रैमाससम्ममा रू.१ अर्ब २ करोड २६ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कुल कायम रहेको बीमा लेखको सङ्ख्या ५ लाख ३० हजार ५ सय ९१ रहेको छ ।
कुल जारी बीमालेखको सङ्ख्या १५ लाख ५६ हजार ६ सय ६२ पुगेको छ भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम रू.१ करोड ६ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू.३७ दशमलव ७६, मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ दशमलव ८२, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू.१ हजार ३ सय १४ दशमलव ०३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.२ सय ६६ दशमलव ५५ रहेको छ । आइतवारको मूल्य नेटवर्थको ६ गुणा छ ।
१९ नोभेम्बर २०१७ १८ फेब्रअरी २०१८
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा अन्तिम दिनमा कालो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४५ दशमलव २८ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन ७ दशमलव ६५ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा तल छ । यदि हालको मूल्य रू.१ हजार ६ सय ९० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य महँगिएमा रू.१ हजार ७ सय ९ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू.१ हजार ६ सय ६० मा टेवा पाउन सक्छ ।